« Guitar Madagascar » : « Film » maneho ny kanto sy ny kolontsaintsika (NewsMada) | AEMW
« Guitar Madagascar » : « Film » maneho ny kanto sy ny kolontsaintsika (NewsMada)
Mbola maro ny variana sy mitolagaga amin’ny harena ara-kolontsaina sy ara-javakanto ananan’i Madagasikara. Eo koa ny tantaran’izy ireny. Anisan’izany ilay mpanatontosa sarimihetsika teratany japoney; Takeshi Kamei. Nanatontosa horonantsary mikasika izany mihitsy izy, izay mitondra ny lohateny hoe “Guitar Madagascar”.
Nanara-dia mpanakanto malagasy efatra mirahalahy i Takeshi Kamei, tamin’ny fanatontosana ilay tantara. Tsy iza izy ireo fa i Thominot (tarika Hazolahy), Baba, Teta ary i D’Gary. Araka izany, samy mpitendry zavamaneno misy tady, ny gitara sy ny kabôsy, izy efatra ireo. Io rahateo no nahatonga ny lohatenin’ny tantara, “Guitar Madagascar”.
Resy lahatra anefa ilay mpanatontosa “film”, ary asongadiny mihitsy, fa samy manana ny hanitra ho azy ireto mpanakanto malagasy ireto. Itovizan’izy ireo kosa ny fitazonana ny maha Malagasy, ny vakoka avy any amin’ny faritra niavian’izy ireo tsirairay avy.
Etsy ankilan’izay, ankoatra ny mombamomba ny vakoka ara-mozika, avoitran’i Takeshi Kamei ihany koa ny fifandraisan’ny mozika malagasy amin’ny andavanandrom-piainany sy ireo fomba amam-panaony samihafa. Ao anatin’izany, indrindra indrindra, ny tontolon’ny velona sy ny maty (fahafatesana, famadihana).
Araka izany, toy ny boky mampahafantatra bebe kokoa an’i Madagasikara sy ny harena ara-javakantony sy ara-kolontsainy ny horonantsary notontosain’ity Japoney ity. Ho an’ireo liana, hanokafana ny hetsika “Focus cinéma Japon” ny fandefasana azy, etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ny 26 aogositra izao.
@dmin August 20, 2016 NewsMada No Comments
← USAID : miasa ho an’ny vonjy aina (NewsMada)
Kitra : mpitsara 25 nahazo fiofanana avy amin’ny Fifa (NewsMada) →